တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အပင် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ခရု Achatina ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
အပေါ် Posted 28.10.2018
အာဖရိကခရု Achatina - ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဂဏန်းကွက်များထဲမှ။ ဤအခရု၏အရှည် 30 စင်တီမီတာ Spread ကျက်စားရာနေရာအထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် - ။ အပူပိုင်းရာသီဥတုနှင့်အတူနိုင်ငံများ။ သင့်အိမ် အကယ်. ...
အိမ်တွင်ခရု Achatina များ၏ content
ကြောင်, ခွေးနှင့်အသေးစားကြွက် - အကြိုက်ဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ။ သူတို့ကမခွဲခြားဘဲဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏, အိမ်များနှင့်တိုက်ခန်းများအတွက်မွေးဖွားပေးလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာ Achatina နှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖက်ရှင်အပေါ် ...
Achatina ခရု - အာဖရိကမှထူးခြားဆန်းပြားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် - စောင့်ရှောက်မှု၊ မျိုးပွားခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
အပေါ် Posted 28.10.2018 28.10.2018
သငျသညျအလုပျမှာအချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့ရှိသည်, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာဒါအိမ်တော်ကိုအနည်းဆုံးအချို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်။ အကြောင်းအရာက "ဇိမ်ခံ" ခွေးဖြစ်ပြီး, ကြွက်အမျိုးမျိုးဖြစ်ဟန်ပါလျှင် "အသေးအဖွဲ။ " သငျသညျခငျြတဲ့အခါမှာ ...
အဘယ်မှာရှိရုရှား၌ယူကလစ်ကြီးထွားလာသလဲ? ထိုသို့အတိအကျကျနော်တို့ rastt သလဲ? သြစတြေးလျ, သူတို့ကိုအများကြီး။ သူတို့ကအဲဒီမှာမပေါက်ပါဘူး။ ထိုအရပ်၌ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလျှင်, အခြို့ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်သင့် ...
ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအိမ်မှာကြောင်နှင့်ငှက်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော ကျနော်တို့ကလှောင်အိမ်နှင့်ကြောင်တစ်ကောင်အတွက် Cenarion Hold မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သူမသည်ပင်ကညပ်နှင့်များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ဘူး ...
ပိုးဟပ် မှလွဲ. အဘယ်အရာကိုအင်းဆက်ပိုးမွှားအလျင်အမြန်တိုက်ခန်းမှာကြမ်းပြင်မှတဆင့် run နိုင်မလဲ?
ပိုးဟပ် မှလွဲ. အဘယ်အရာကိုအင်းဆက်ပိုးမွှားအလျင်အမြန်တိုက်ခန်းမှာကြမ်းပြင်မှတဆင့် run နိုင်မလဲ? အနက်ရောင်ပိုးဟပ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကအနက်ရောင်နှင့်အနည်းငယ်တောက်ပသာမန်ပိုးကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းအနီရောင်မတူဘဲနဲ့ ...
Fenech ကဘယ်သူလဲ ဤသည်သဲကန္တာရ၌နေသောနားကပ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်။ အပူ၌ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပြီးအမဲလိုက်နိုင်သည့်အံ့သြဖွယ်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်။ နားရွက်ကြီးများသည်အနာဂတ်ညစာ၏အနည်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုကောက်ယူနိုင်သည့်နေရာဒေသများဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်အဖြူရောင်မှိုလို့ခေါ်တာလဲ။ Boletus မှိုခြောက်သွေ့ပြီးနောက်၌ပင်၎င်း၏အရောင်ကိုအဖြူဟုခေါ်သည်။ မှိုအဖုံး၏အောက်ပိုင်းသည်အလင်းရောင်ရှိပြီးအပေါ်ဘက်သည်အညိုရောင်ဖြစ်သည်။ မှိုဖြူသည်ဘုရင်ဖြစ်သည်
အဘယ်ကြောင့်ညိုညစ်ရောင် bristles? ညိုညစ်ရောင် bristles အလုံအလောက်ပိုးကောင်များမှင်, ကျွန်တော်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလူအသားအရေပြင်ပသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုကနေခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်ပေးရန်သည်အတူတူပင်များအတွက်လိုအပ်နေပါသည် ...
ပါရှန်းကြောင်အမည်ကိုမှဘယ်လိုနေသလဲ? နာမည်တစ်ခုရွေးချယ်တဲ့အခါ, သင်သည်ပိုင်ရှင်နှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, ဒါမှမဟုတ်နာမည်တစ်ခု၏ကငျြ့တရားတာဝန်ကျတဲ့နေရာများ၏လိုအပ်ချက်တို့မှရရှိသောသကဲ့သို့သငျခညျြနှောငျစခွေငျးငှါအစည်းအရုံးအချို့ကိုကောက်ရမည်ဖြစ်သည် ...
သက်ရှိအားလုံး၏ဆဲလ်များအတွက်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများလိုအပ်သနည်း။ ငါကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကနေငါမှတ်မိသည်အတိုင်း, ဆဲလ်ထဲမှာနျူကလိယပါဝင်သည်။ အလှည့်၌အလှည့်တွင် DNA တွင်ပါဝင်သည်။ အမြှေးပါးဟုခေါ်သောအခွံတစ်ခု။ အဆိုပါ cytoplasm - ...
နွားမတစ်ကောင်ဘာကြောင့်ချိုလိုတာလဲ။ ငါနွားရဲ့ချိုကိုသဘာဝအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်သူတို့၏ချစ်ရသူများကိုအန္တရာယ်နှင့်ရန်သူမှကာကွယ်ရန်ပထမနေရာတွင်ပေးခဲ့သည်၊ ဒုတိယအနေနဲ့နွားတွေရဲ့ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုက ဦး ချိုကိုပေးနိုင်တယ်ထင်တယ်
အဆိုပါကြောင်လမ်းပေါ်မှာအတွက် mouse ကိုဖမ်းမိအဘယ်ကြောင့်သူမ၏နေအိမ်ဆောင်ကြဉ်း?
အဆိုပါကြောင်လမ်းပေါ်မှာအတွက် mouse ကိုဖမ်းမိအဘယ်ကြောင့်သူမ၏နေအိမ်ဆောင်ကြဉ်း? ဗီဇကြောင့်သူ့သခင်ကတတ်၏။ အကြောင်း, သူမ၏ feeds သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချို့ဒီဂရီမှဆည်းကပ်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ...
သစ်တော်သီးသည်အဘယ်ကြောင့်အသက်ရှည်ခြင်း၏သင်္ကေတဖြစ်သနည်း။ ၎င်းသည်တရုတ်ရိုးရာကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည် (သစ်တော်သီးများသည်သက်တမ်းရှည်သောသစ်ပင်များ၊ 100 နှစ်အထိကြီးပြင်းလာခြင်း)၊ အခြားနိုင်ငံများတွင်မူကွဲပြားခြားနားသောသင်္ကေတအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ရှေးဂရိ, သစ်တော်သီး ...
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခွေးနှင့်အဘယ်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်ရှိ fox နိုင်သလား?
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခွေးနှင့်အဘယ်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်ရှိ fox နိုင်သလား? Fox ကယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုရှာမထင်ခဲ့ဘူး, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြင်းထန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားဗားရှင်းရှိ fox ဆိုးသောဝိညာဉ်၌တူညီသောမဖွစျနိုငျပါဘူး ...
အဘယ်ကြောင့်ခွေးချိုမြိန်မဟုတ်နိုင်သလော ခွေးရဲ့အံသွားပေါ်အဆိုး Vliet ချိုမြိန်လူသားလိုပဲ။ သကြားသွားရာမှကယ်လ်စီယမ်ကြာ, သူတို့ကြွပ်ဆတ်ဖြစ်လာ, ပြီးတော့ putrefaction ဘက်တီးရီးယားဖွံ့ဖြိုးဆဲ, သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုစတင် ...
တစ်ပွင့်ကို၏ site မှာစက်ရုံအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သလဲ?
အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး ပန်းပွင့်အရပျ၌ဖွဲ့စည်းသည်? သဘာဝကျကျသန္ဓေသားသန္ဓေသား, အောင်မြင်သော fertilization ဖြစ်ပွားလျှင်။ ဒီဟာတွေကမျိုးစေ့တွေ (ဥပမာပန်းပွင့်တွေဖြစ်ရင်)၊ နောက်ပိုင်းမှာရင့်ကျက်နိုင်တဲ့အစေ့တွေပါတဲ့သေတ္တာတွေပါ ...
အိမ်သာသို့ကိုယျတျောကိုလျှော့ချဖို့ကြောင်တစ်ကောင်သင်ပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ငါသိပ်, ထို့နောက်ငါဗန်းရှင်းလင်းဖို့ရှိသည်မဟုတ်ဘူးလိမ့်မယ်, ငါ့ကြောင်တစ်လြျှောများအတွက်အိမ်သာသူ့ဟာသူထံသို့ သွား. တွေ့ချင်ပါတယ် ...
အဘယ်ကြောင့်ကြောင်အိမ်မှာကြွက်တွေကိုဆောင် ခဲ့. သလဲ?
အဘယ်ကြောင့်ကြောင်အိမ်မှာကြွက်တွေကိုဆောင် ခဲ့. သလဲ? ကြောင်မကြာခဏပြီးသားတစ်ဝက်ကိုစား, အိမျသို့ဖမ်းမိကြွက်နှင့်ဂြိုလ်သားငှာကွိမျဒါပေမယ့်လည်းကြွက်များ၏အသေကောင်မသာဆောင်ခဲ့လေ၏။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောပေမယ့်ကြောင် ...
ရှာလကာရည်နှင့်အတူကြမ်းပြင်ကိုဆေးကြောရန်, ဒါကြောင့်ခွေး gadila ပါဘူးဘယ်လိုနေသလဲ?
ရှာလကာရည်နှင့်အတူကြမ်းပြင်ကိုဆေးကြောရန်, ဒါကြောင့်ခွေး gadila ပါဘူးဘယ်လိုနေသလဲ? သူမ၏ခိုင်မာတဲ့အနံ့ကနေ nashatyrkoy နှင့်အတူ သာ. ကောင်း၏။ ငါရှာလကာရည်ဤမျှလောက်အနံ့ပါလိမ့်မယ်မဟုတျကွောငျးထင်ပါတယ်။ ရှာလကာရည်ခွေး shit နို့ကွာမဟုတ်ပါဘူး ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 249 Next ကို 's Page
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,453 စက္ကန့်ကျော် Generate ။